Apple inoshanda kuwedzera Apple Pay mune dzimwe nyika | IPhone nhau
Ignacio Sala | | Apple Pay, Noticias, Apple zvigadzirwa
Apple Pay yaive imwe yezvinyorwa zvakakosha zvikuru zvakaunzwa neCompertino-based firm makore anoda kusvika maviri apfuura. Kubva musi, kukura kweiyi chikuva Icho chiri kunonoka zvikuru kana ichienzaniswa nemamwe masevhisi emakwikwi Ivo vanga vari mumusika kwenguva shoma uye vanowanikwa mune dzimwe nyika zhinji, senge Samsung Pay.
Asi iyo femu inoda kumanikidza iyo yekuwedzera uye kwete kuisunungura kuti igone wedzera kufukidzwa kwenyika dziripo chaizvo. Nhasi Apple inowanikwa munyika nhanhatu: United States, Canada, United Kingdom, Australia, China neSingapore, iyo yakasvika mavhiki mashoma apfuura. Nyika dzinotevera uko kwave kuda kusvika iHong Kong neSpain kubva paruoko rweAmerican Express.
Apple Pay yakasvika muSingapore ichibva muruoko rweAmerican Express, mukati memavhiki mashoma ave kuwanikwa munyika, 80% yemakadhi aripo akatotsigirwa neiyi tekinoroji yekubhadhara yemagetsi. Zviri pachena kuti mubatanidzwa neAmerican Expres uri kubhadhara, sezvo chinhu chimwe chete chakaitika muAustralia mavhiki mashoma mushure mekumhara nekambani yechikwereti.
Sekureva kwaTechCrunch, Jennifer Bailey Mutevedzeri weMutungamiri weApple Pay inoti iri kuedza kuwedzera nekukurumidza muAsia neEurope, asi pasina kuzivisa kuti ndedzipi dzichava nyika dzinotevera uko hunyanzvi uhu hunosvika. Kana Spain iri inotevera nyika yeEurope, sekureva kwaTim Cook mushure mekubatana neAmerican Express, runyerekupe rwazvino runosimbisa kuti France ichava nyika inotevera kukondinendi yekare kupa tekinoroji iyi yekubhadhara.
Kutanga, tinotarisa kukura kwemusika wezvigadzirwa zvatinoita. Isu tinofungawo nezvekuratidzika kushomeka kwekubhadhara chikwereti kufukidza mumabhizinesi uye kupinda kwemakadhi echikwereti pakati pevashandisi. Apple Pay payakauya kuUnited States, kutengesa kwekutengesa kwakawedzera 4%.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Pay » Apple inoshanda kuwedzera Apple Pay mune dzimwe nyika
Apple inogona kugadzirisa Apple TV nekuwedzera maficha
Apple yakafunga kutenga Nguva Warner